UMartin Vrijland uyayeka UKUBALULEKILEYO: UMartin Vrijland
Emva kokufumana ezininzi ze-imeyile kwaye emva kweengxoxo ezithile ezilungileyo, ndagqiba ekubeni ndiqwalasele isigqibo sam sokuyeka ngokukhawuleza. Ingakumbi ukuphendula Naomi Hoogeweij (Ngaphambili Jeroen High Weij), i inkabi karhulumente lowo emva iqela Swapichou kwaye ngoku olusebenzayo Jalta.nl, yaba umququ lokugqibela. Jeroen ngempela umthombo yonke ngodaba banyelise ngekhompyutha apho ukufumana kum, nangenxa oku wahlela evela kurhulumente, zonke iiwebhusayithi abaye phezu ubungqina bokuba inkululeko yokuthetha iminyaka ayisekho. Ngokukhawuleza xa ubhala okanye ucwaninga into eyahlukileyo kwimbono eqhelekileyo, uya kwenziwa yincinci encinci kwaye uchithe. Ngaphandle ke ukuba nawe nenkomo elawulwa okanye website, ezifana Geenstijl okanye abantu abathile enye kwisekethe eendaba.
Indlela abasabela ngayo abantu abaliqela ukuba ayeke ubungqina lobuqu njani avuleka amehlo abo, wandinika ubusuku ye- kakhulu ukucinga, kodwa njengoko Aleister Crowley mxhasi kunye nombingeleli RTD (Luciferian full-ubude) Jeroen - ngazo Uzame ukubhalela ileta - ukuba ndibhiyozele ukuba ndihambe, ndicinga ukuba loo nto ikhuthaza ukuba iqhubeke. Jeroen kuba eneneni ubungqina bokuba imfundiso yam oluchanekileyo malunga matrix Luciferian.
UYeren usanda kutshintshwa waba ngumfazi kwaye ngoku ubizwa ngokuthi nguNahogogeweij. Akazange abeke umbono wakhe wobomi wobomi (owamthanda ukuthenga naye) phantsi kweengalo zakhe. Yena kunye neqela (Swapichou ebizwa) ukuba kukho, ngexesha lam, ixesha elizeleyo elasungulwa kundibuyisela ngaphantsi, ekuhlaleni nokuba ubiza isiza Woodstock Beach Club Bloemendaal, kunye nesicelo ukunika inkcazelo kakubi ngam. Kwakulo xesha kwakukho ithente elityelele elwandle. Kwakukho iminxeba ezibekwe naphi intanethi kunye lyrics babekwa ngodaba ezinzima, nonyeliso, leyo igama, umhla wokuzalwa, idilesi kunye nesikolo ukusombulula intombi yam (ngubani Andiboni kulo lonke) bafakwa kwi-intanethi. Ndiye iintsuku ze-2 kwisikhululo samapolisa sokunika ingxelo, kodwa nanamhla iNkonzo yoThutho kaRhulumente ayenzi nto nayo. Ngaba oku akukona ubungqina bokuba urhulumente usebenzisa abakwa-hitmen ukutshabalalisa nabani na ohluphekileyo? Umqeshwa waseburhulumenteni uJeroen wayebhubhisa ngokucacileyo ubomi bam kwaye urhulumente uyala ukuphatha isibhengezo. Ingqiqo, kuba liqela labo elichaphazelekayo elijongene nalo.
Inyaniso yokuba uJeren wayeyindoda yam ngumfazi obungqina bokuthi abazalwana bakaLusifer baqhelisa, apho ndachaza ingxelo apha. Ihlabathi lihamba ngeyinyathelo ngeyinyathelo elungiselelwe ukudluliselwa kwempahla kunye nokudibanisa ne-AI phantsi koburhulumente behlabathi baseLuciferi. Ndacacisa amanyathelo alandelayo:
Isigaba 1: ukukhululwa kwe-2.0 yowesifazane wesalathiso Andiyidingi indoda ('ukuxhatshazwa kwimeko yentsapho yasendulo', imodeli emibili yokufumana abantwana, amaziko abantwana ukunakekelwa kwamanye amazwe, inxaxheba echaphazela uluntu kwimfundo);
IsiGaba se2: ukukhululwa kobufana besini ('ukuzaliswa nge-IVF', ukunciphisa inani labantu, ukuphazamiseka okuqhubekayo kwezakhiwo zentsapho zakudala);
Isigaba 3: ukuxhobisa kobakhe (kuqheleke yemfuza emzimbeni womntu) kwaye tyhala cala ngokwesini hype kunye #MeToo intetho mngeni (njenge 'ihenyukazi' lokulawula rapper egobile);
Isigaba se-4: ukunyuka kwabantu abaguquliwe, i-transhuman, i-cyborg (ukulungelelanisa ukuguqulwa kwamanotechnology kwiseli ye-biological kunye noxilongo lobuchopho kwi-intanethi);
Isigaba 5 (uLuciferian) ubuninzi.
UJeren mhlawumbi wayekhethile ngokucacileyo kunye nezizathu zobungangowesi sinyathelo se-transgender kwaye wayesazi ukuba unokundityalela nge-intanethi, kuba wayeza kufumana i-ID entsha. Ngaphezu koko, wayecatshulwa ngokucacileyo ngumqeshi wakhe, kuba ngenxa yesigqibo sam, akukho nto eyenziwe nanamhla. UYeren waphendula ngoku kusasa kusisigqibo sam sokuyeka:
Ngoko ke into ebalulekileyo kukuba wenze ibonisa ngokucacileyo ukuba urhulumente lingayifumenanga le ukukopela nokuba - nangona kukho into ibe ukubhala kunditshabalalisa mna, kunye konakalisa ubomi bam - I ukukhanya eqaqambileyo phezu ukukhanya lobuxoki Luciferian kuhlala ubeka. Ekugqibeleni, uYeren uhlala ebonisa ubungqina bokuba iincwadana zam zi-100% ezichanileyo.
ubomi bam kuye kwaba nzima kwiminyaka yakutshanje 6 ukuba inkululeko yokuvakalisa izimvo kweli lizwe .Imisebenzi lwentando yesininzi ephepheni okanye khona, kodwa xa kusenziwa uguqula urhulumente ukutshabalalisa abantu Khawube bayo oqeqeshiweyo online. Oku kwenzeka ngokungahlawulwanga. Ithelevishini ibonisa ukuba iindaba okanye i-Nonsense kufuneka zinike ingqiqo yokuba iiforikhi zeendaba ezikhohlakeleyo zikhona eRashiya. Ububungqina bam namava abubonakalisa kungekho phuculo lokuba i-AIVD isebenzisa nje ezo zixhobo kwizinga elikhulu.
Ngoko ndiya kuqhubeka ndibhala, kodwa ndiya kukwazi ukugcina kuphela ukuba uncedisa ngemali. Ngexesha lokubhala ndiyitshisa i-10 euro yombane kwi-220 generator volt, kuba ndinelanga elincinci lokunikezela amandla (ukusuka kwipaneli yelanga apho kukho i-2 piece). Kwiminyaka yakutshanje ndenze konke ukugcina intloko yam phezu kwamanzi ngokwezimali kwaye ngoku ndiye ndafudukela ententeni yokulwa ne-squat settlement. Oku kunjalo ngenxa yemigudu kaJeroen Hoogewij kunye neqela lakhe, kuba ngezenzo zakhe andinakuze ndifumane umsebenzi naphi na. Umasipala wenqaba ukunginika inzuzo xa ndiqhubeka ndibhala. Nabani na ohambayo igama lam liza kulwa nohlaselo kunye nokunyelisa kwidilesi yam. I-Google yenqabe ukususa iinqonkqo, ngoko ke kukho inkcaso ngokuchasayo. I-Facebook ikwazisa ngokucacileyo iphepha elinoMartin Vrijland kubalandeli abatsha. Kodwa ukuze uqhubeke nokulwa, ndiza kufuneka ndisebenzise i-Google ne-Facebook ukufikelela kubantu. Ngelishwa, oko akuphumelelanga ngokwaneleyo ngaphandle kwee-arhente ezichasayo. Kubonakala ukuba ufanele ulwe nabo kwisiqonga sabo kwaye usasebenzise ixesha elide kunokwenzeka.
Ngoko ke ndiya kuqhubeka ndibhalela amanqaku njengoko ndingawugcina intloko yam phezu kwamanzi ngenkxaso yakho. Ngoko ke ndikukhuthaza ukuba ube ilungu kwakhona. Isantya apho ndiyakubhala khona siya kuba sezantsi, kuba kufuneka ndichithe ixesha kwigadi yemifuno, ukwakha i-shower yangaphandle, ukuqokelela amanzi kumlambo kunye neminye imisebenzi ebalulekileyo. Nangona kunjalo, ukuze ukwazi ukuqhubeka nokuhlangabezana neendleko zokuphila kunye neendleko kule website, inkxaso yakho inzima kwaye ihlala njalo. Vumela wena kunye nam ukuba sinike isibonakaliso kwilizwe lobuxoki laseDutch ukuba abanokukrokraza izibongo ezigxekayo. Musa ukucinga "Omnye wenza oko kum", Kuba ukubheja kwakho kubalwa. Nangona abanye bavele banqabulisa ubulungu babo ngelo xesha, abanye baye bathetha inkolelo yabo kum kwaye babonise ukuba baya kuqhubeka nokuxhasa. Ndiyifumene loo nto imnandi kwaye inomusa. Ngoko ke ndingathanda ukubonga wonke umntu ngenxa yeengxelo zenkxaso kunye neenkuthazo zokuqwalasela isigqibo sam. Ngokuqinisekileyo kwakusebenza. Kwaye ke ndiyazinikela isigqibo sam ngokuyinhloko kuJeroen Hoogeweij.
Unako apha abe ilungu okanye apha ukwenza iminikelo yesikhathi esisodwa.
UMthetho oYilwayo owenzakalayo ukumkani ngokwenene uphawuleza ukuhlambalaza i-Erdogan
UMartin Vrijland wamisa iqela le-SCL ngaphambi kokuba iNew York Times yenze njalo malunga nokunyulwa kokhetho
tags: kubalulekile, Facebook, Hoogeweij, jalta.nl, Jeroen, ukunyelisa, UMartin Vrijland, Nahomi, lihlazo, yeka, update
3 Aprili 2018 kwi-13: 13
Dear Martin, ndixelelwe ukuba uyaqhubeka!
Uninzi lwabantu lwade luye lwayekade luye lwayeka, mayeke ukuba abazange baqalise umsebenzi lowo; uqalise i-website ukuvusa abantu ekulaleni kwabo ukulala kunye nokubonisa ingozi ezayo.
Ngaphambi kokuba ndiqale ukusebenza kwiwebhusayithi yam, inkqubo yazama ukundichitha, ngoko ke kwafuneka ndijamelane nokufa ekuqaleni kwe-2014. Ulinde ... Lezo zithintelo ebomini bam ziyizizathu zokuqalisa i-website yam.
Ngenxa yokuba ndiyimeko engqongqo yezemali, ngelishwa andinakukwazi ukukuxhasa ngemali. Nangona kunjalo, ndiyathemba ukuba abantu abaninzi baya kubona ukuba iwashi icawa iqalile ngumbonakaliso wokuba ishumi elinesibini ntsimbi. Ukufunda amaqaku akho akwanele. Ngoko ke ndiyathemba ukuba ixesha lexesha lesonto lihamba kakuhle kwaye abantu bazimisele ukukuxhasa ngemali, ukubhalisela i-newsletter kunye nokuthumela amanqaku akho kwabanye.
3 Aprili 2018 kwi-16: 42
U-Martin, iKlasse uva - impendulo yakho kuNahomi. Ndiphinda kabini igalelo lam - akuninzi, kodwa sinethemba ukuba zonke iinqunto zinceda. Inhlanhla enemiyezo yemifuno - ebaluleke kakhulu .. Kuhle kakhulu ukuba uyaqhubeka. Ndandibukela kulo mva kwiphephandaba le-intanethi kwaye ndigula ngayo yonke imilayezo engenamsebenzi.
Aubury wabhala wathi:
3 Aprili 2018 kwi-16: 45
Kulungile ukuva ukuba uhamba. Inani leendawo ezizimeleyo ezizimeleyo zaseNetherlands zingabalwa kwizandla ze-2 ...
Uyazi njani ukuba nguYeroen? Ngaba akukho namnye umntu ongathetha ngalo?
3 Aprili 2018 kwi-21: 38
Ndiyabonga kwaye ewe, ndiyazi ngokuqinisekileyo.
4 Aprili 2018 kwi-05: 42
Aubury. Bala kwizandla ze-2? Ukuba yinyaniso kuphela. Zithi nje ezimbalwa ke ngoko. Ndiza kukunceda uphuphe ngokukhawuleza kwiphupha.
3 Aprili 2018 kwi-19: 59
Okokuqala, ndiya kwenza umnikelo. Ukongezelela, ngaba ungayichaza inani lamalungu ngeliqela kwiwebhusayithi kwakhona? Ngethemba ukuba kukho abantu abaninzi abafuna ukwenza igalelo lemali.
3 Aprili 2018 kwi-21: 39
Ndiza kuyibeka kwakhona kwi-intanethi kusasa, kodwa oko kufuneka ndifake iplagin kwakhona. Ndayisusile ngenxa yokuba ayiyikubeka imifanekiso ethembekileyo.
4 Aprili 2018 kwi-06: 59
Umnikelo wenziwe kwaye ujonge phambili kumanqaku amasha epeni lakho !!!! Ndibiza abanye ukuba bancede uMartin njengoko umsebenzi wakhe ubaluleke ngakumbi kunokuba abantu abaninzi bacinga.
IDranreb Silenroc wabhala wathi:
3 Aprili 2018 kwi-22: 00
Ukuba kuyimfuneko, unokuhlala uhlala kunye nam, uMartin.
Kuya kuba okuyingqayizivele ukuba ndihlala ndinika imali kwaye ngokuqinisekileyo kungekhona ngoku, ekubeni ndibe siswelekile ukuxhasa iphrojekthi ezinzileyo, eziphilayo.
4 Aprili 2018 kwi-11: 05
Wow iphosa ngokupheleleyo ndagula ngenxa yoko
kwaye ndiyathemba ngokuqinisekileyo ukuba kuya kubakho inkxaso eninzi, sele ndisezintabeni zam xa ndibeka izimvo kwi-YouTube, kodwa into ongayiboniyo ayiboni mntu,
Isiteya ukuya ezulwini
4 Aprili 2018 kwi-17: 34
Ngombulelo kuHoogeweij, uMartin uyaqhubeka ebhala amanqaku ....
Kubonakala ngathi bakunzima ukuba uqhubeke. ????
4 Aprili 2018 kwi-19: 07
Ewe danny ... bona kufanele babe nako ukuqhubeka nomntana amazinyo kwinto elibukhali, nto leyo nayo isibetho ngenxa ukuba uqhubeka ukudlala umdlalo webhodi. Ukuba abalawuli ufumana ngenene kwi cesspool zabo, ngoko ke musa ukuba ingxelo yokuba umzekelo yakho ifikelele, ngoko yanyamalala lonke web site kunye nezinye izinto ezihlekisayo ezinjalo ukuba uMartin sele wazi konke malunga ... isoyikiso, umsebenzi wakho yalahleka, igqwetha lakho wakube ushiya iintanda, akukho ntlawulo, njl ukuba zonakalise ubomi bakho ... Yintoni na ukuba kukwenza adubule into touch elungileyo ... ingqondo wena Hahahaha ... kwaye Yo ukwamukela Martin ????
Mna wabhala wathi:
9 Aprili 2018 kwi-20: 13
Ndenze umnikelo omnye. Zonke iincinci zincincedo. Ndicinga ukuba uJeren / Naomi Hoogeweij uyisabisa yindoda! Ndiyavuya ukuba uyaqhubeka ixesha lokuba. Ngokuqinisekileyo, unike impendulo enhle kwiingcamango ezingaqinisekanga, ezingaqinisekanga zendoda enyanyekayo, eyoyikisayo! Inhlanhla enemiyezo yemifuno. Ndikunye kwaye andikaze ndibe nemifuno enje njengamanje. Ayikwazi ukufanisa izitolo kunye ne-junk yabo ehlakulelweyo, ehlanjululwayo kwaye eguquliwe. Ndandisoloko ndicinga ukuba iingcambu zazinene kodwa akunjalo. Iingcambu zangempela zendalo ziyizinyoka kwaye ayinayo i-orange ekhanyayo kumbala kodwa zonke zibhetele. Inhlanhla nge website. yigcine!
9 Aprili 2018 kwi-21: 26
Ndiyabonga ngenkxaso yakho. Siyabonga!
Yiya kwi-bio yokuzilimaza!
Boon wabhala wathi:
10 Aprili 2018 kwi-10: 40
Hai wonke umntu,
Ngexeshana le website ilandelwa nentshisekelo eninzi, ngoko kuphela xa ibhaliswe. kakhulu kwintetho yam akukho manqaku angamanqweno malunga nemicimbi eye yangena kum minyaka yakutshanje.
Ngaba loo ndlebe yayidliwano neVan Houts. ngeveki edlulileyo, ndandisele ndicaphukile ngotshani kunye nolwaphuzi ekusasazeni kodwa ukusuka kule ngqungquthela njengoko kuchazwe nguMartin andizange ndiyibone. Ngoko uyabona kwakhona, nangona usuke usebenza ngakumbi nangengqondo kwiminyaka yamuva, ezinye izinto zisehla. Kodwa ngokwenene kukho inkathazo yamagcats aseHamelin asebenzayo kule mihla ukuze kuhlale kuhlale kuqaphile.
Kuye kwinqanaba elimalunga nekratshi eliduna! UYeren / Naomi Hoogeweij, wahlala iintsuku kunye naloo mfanekiso wenyuka emva kwam intloko kwinkampani yombuzo obani
Uhlala ekhumbuza njalo?
Ngokukhawuleza kwafika, kungumfanekiso wokutshatyalaliswa kombulali osuka kuSilence okanye iMvana ezama ukugubungela iifesti zowesifazane kwesikhumba sawo onke amaxhoba akhe abulawe.
Ibeka lotion kwesikhumba ....
« UMartin Vrijland uyayeka
UKUQHUBA: ukubikezela kukaMartin Vrijland kwimeko yetyhefu yaseSikripal kuphuma ngoku uBoris Johnson wabanjwa elele! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.306.654
UMartin Vrijland op Eyona ndlela isebenzayo yokulwa i-coronavirus ivela eTshayina (ividiyo)
Uvukelo op Eyona ndlela isebenzayo yokulwa i-coronavirus ivela eTshayina (ividiyo)